China HDPE yakasimbiswa ichitenderera pombi (B-mhando chimiro) fekitori uye vagadziri | Shengyang
HDPE ichitenderera yakasimbiswa chimiro madziro mhando B pombi inonziwo HDPE ichitenderera mamiriro emadziro pombi, carat chubhu, HDPE ichitenderera mhando B pombi, yakakwira density polyethylene ichitenderera pombi, mhando B chimiro chemadziro pombi. Iyo mhando nyowani inochinjika pombi ine huremu hwakareruka, yakasimba simba, inotsvedza yemukati madziro, ngura kuramba, kukwegura kuramba, kupfeka kuramba, kumanikidza kuramba, yakasimba kukanganisa kuramba, kugona kwakanaka, hutano uye chengetedzo. Hunhu hwesimbi iri kumusoro, muviri wakabatana, mhando yekubatana yakanaka, hapana leakage, hupenyu hwebasa hwakareba, uye kuvaka kuri kukurumidza uye nyore.
◎ Hot inyauka nyika ichitenderera, synchronous ichitenderera mukati nekunze kwemadziro madziro, pombi yakazara yunifomu, hapana weld.
◎ Iko kushandiswa kwemhepo-kwatonhorera, pombi yekuchengetedza kupisa mukati mekuumbwa kwakaparadzirwa zvakazara, hakuite kusagadzikana kwemukati, hapana delamination uye kutsemuka.
◎ Cold demoulding, pombi kutonhora kune tembiricha yemukati, uchishandisa mold shrinkage mode demoulding, pombi haizove yakaremara. Uye HDPE mhango rusvingo ichitenderera mutopota, kushandiswa kweyekushandisa michina uye tekinoroji, yakakwira-simbi polyethylene zvinhu (HDPE) sezvakagadzirwa zvinhu, mune Mvura-yakatonhorera, inopisa-yakanyunguduka ronda kuumba, A-mhando chimiro maererano neepasi rose GB / T19472.2-2004 mirau Wall pombi. Mukuita izvi, iyo chubhu chubhu inotanga kubudiswa, yobva yaumbwa nekukuvara kuita chubhu yakatenderera mushure mekutonhora nemvura.
◎ HDPE yakakwira-density polyethylene spiral yakasimbiswa pombi mukugadzirwa kweye yakasvibirira mashandiro ekuita zvinodiwa zvakakwirira kwazvo, saka kuwedzera kune 2% ye masterbatch. Zvimwe kunze kweizvozvo, zvimwe zviri HDPE sechinhu, saka mutengo wacho wakaderera. Uye HDPE mhango rusvingo ichitenderera kunowedzerwa chubhu yuniti kuomesa kuomesa kwakaburitsa zvakawanda zvinopedzwa, saka mutengo wakakwira. Nekudaro, nekuda kwekudyara kudiki mumidziyo yekugadzira, zvipingaidzo zvakaderera, saka vazhinji vanogadzira, mumakwikwi asina kugadzikana mumusika, kuitira kuti vawane mutengo weiyo Kubatsira, huwandu hwakawanda hwezvinhu zvisina kujairika (calcium carbonate) uye zvigadzirwa zvekare, zvichikonzera mugero wakakura wemutengo, uye nekuseka kwakaderera.
◎ HDPE ichitenderera yakakwidziridzwa chubhu uchishandisa socket mhando electrofusion yekubatanidza (solid rig interface), interface uchishandisa socket uye electrofusion nzira mbiri panguva imwe chete. HDPE inonaya yakasimbiswa pombi inomira kwete Munzvimbo dzinoda kudzorerwa nekukurumidza, HDPE mapaipi akasimbiswa mapombi anogona kushandiswa nenzira dzakasiyana siyana. Ivhu revazhinji chitsitsinho pre-welding, uye ndokuzoisa mugoronga. Uye HDPE isina huni madziro ichitenderera pombi uchishandisa (yemagetsi) inopisa inonyungudika nzira yekubatana, nekuda kwepombi chiteshi deformation, (yemagetsi) inopisa inyauka tepi haigone kuve yakabatana neyakahwanda madziro ichitenderera pombi. Mushure mekunge pombi yazara zvakakwana, iko kuvaka kunofanirwa kuvezwa mumugero, izvo zvinoda kucherwa kukuru uye kunonoka kuvaka kumhanya. (Magetsi) inopisa inonyungudika bhandi kubatana, yakasarudzika simba dhizaini, pamwe neiyo pombi yakasungwa musono kureba, haigone kuchinjika kune yakapfava base kana isina kuenzana nzvimbo dzekuisa dzakaiswa.
◎ Muchinhu chimwe chete cheHDPE ichitenderera pombi yakasimbiswa (B-mhando pombi) uye HDPE isina mhango pombi (A-mhando pombi), zvichienzaniswa nehunyanzvi B-pombi kuve iri nani kupfuura A-pombi, kushandiswa kweB-pombi zvakare zvirinani kupfuura A-pombi, mune imwechete index, iwo maviri marudzi epombi zvinhu Zvakafanana nemutengo wakajairwa unofanirwa kunge wakafanana, mutengo unofanirwawo kunge wakafanana, mutengo wekuita kweB-mhando chubhu iri pachena iri nani pane A-mhando chubhu .
◎ HDPE inoyerera yakagadziriswa pombi, mumapurovhinzi emunyika nematunhu nemasekuru, huwandu hukuru hwekushandisa, kunyanya munzvimbo dzemahombekombe, kugarisana kusina kukwana. Dunhu iri rinonyanya kushandiswa. Uye HDPE mhango rusvingo ichitenderera mutopota nekuda kwemaitiro uye chimiro zvakanyanyisa, zvinhu zvacho hazvina kuchena zvakakwana, chengetedzo yeinjiniya yakanyanya kuderera, uye mune dzimwe nzvimbo dzakakosha dzemhango yekumhanyisa pombi, iyo mhango rusvingo ichitenderera pombi yakanyanya kuderera. Unyanzvi hwakatemerwa kushandiswa, hwagara husinga shande munzvimbo dzemahombekombe.
Hazvina kuoma kupedzisa kuti kushandiswa kwesokisi rudzi rwe electrofusion kubatanidza kweHDPE ichitenderera yakasimbiswa chubhu ndiyo inonyanya kuchinjika, uye iyo interface yakaoma. chinongedzo, kuverengera zvese zviri zviviri chisimbiso interface uye yakasimbiswa chimiro. Panguva yekuvakwa kweprojekti, kana tafura yemvura iri mugoronga iri refu, nzvimbo hombe dzemvura dzakaomarara, kana kudonha kwakanyanya, zvinogona kuitirwa pasi Welding yemapaipi mazhinji mumugero, izvo zvisingaite nedzimwe pombi, inogona kukurumidza kuita basa rekuvaka, uye inogona kuitwa nenzira iyi. Panguva imwecheteyo, inodzivirira kuvaka kune njodzi uye inoderedza mari yekuvaka.
Kaviri Masvingo Corrugated Drainage Pipe
Hdpe Corrugated Pipe Ruviri Rusvingo
Hdpe Yakapetwa kaviri Wall Corrugated Drain Pipe Machine
Hdpe Kaviri Rusvingo Corrugated Drainage Pipe
Tsvina Kuraswa Hdpe Double Wall Corrugated Pipe
PP kaviri madziro chemarata pombi
HDPE simbi bhandi rakazadzisa zononoka chemarata mutopota